Namuhla, abazi indima ebalulekile zinc emzimbeni. Abantu abaningi ukuthenga imikhiqizo equkethe zinc, Pharmacy. Nasi isizathu.
Zinc kanye nenzuzo yayo
Ubuningi kunazo zonke kwezingu-isici kwe-retina yeso, amathambo kanye isikhumba, okusho ukuthi ukhethe ukuntula kungaba ngokuphawulekayo ezithinta impilo lezi zitho.
Ngaphezu kwalokho, i-zinc kuhileleke ekuthuthukisweni insulin kanye yegilo i-hormone, kwenza i-nezinkinga isikhumba (induna, eczema, dandruff), kuqinisa izipikili. Ukwelapha kuhlanganiswe zinc kuboniswe ukukhumuzeka kwamathambo, isifo sikashukela, kuyadamba potency kwaphetha ngokuthi amadoda kanye nenzalo wesilisa, nokuvimbela isifo wendlala. Zinc siyasebenza ngoba kwegazi, isifo sezinsini nesifo samaphaphu. Kuyasiza amanxeba ahlukahlukene esikhumbeni, izilonda, ukusha kanye sutures post-kuhlinzwa.
Ngokuvamile, "umsebenzi" ukuthi zinc emzimbeni eziningi, ngisho isidingo nsuku zonke kuyinto encane, kodwa ngemiphumela zinc ukuntula kungaba ngokuphawulekayo ezithinta impilo.
izakhiwo Vitamin-amaminerali ne-zinc
Ngakho usukhethe unakekele impilo yakho futhi uthathe-zinc. Pharmacy, wena uyobe cishe ukunikela amavithamini namaminerali noma Izithako zokudla ne-zinc e kwengoma. Ake sihlole kafushane.
"Complivit" - a eziyinkimbinkimbi amavithamini namaminerali ukuze ulondoloze impilo futhi ukuqinisa amasosha omzimba.
"Complivit trimestrum 1, 2, 3 '- zenzelwe ukusetshenziswa ngezigaba ezahlukene kokukhulelwa, lapho zinc kunomthelela ukuthuthukiswa egcwele i-fetus iphinde ivimbele ukubeletha singakafiki isikhathi.
Ngokuvamile, inhlanganisela, njengabo Vitamin + zinc, ikhemisi zingatholakala kunalokho amalungiselelo amaningi. Ngokwesibonelo: "Selitsink Plus", "Centrum", "Oligovit", "zolimi" "Duovit", "Multitabs" kanye nabanye abaningi.
"Zinc + Vitamin C" kusukela "Evalar" - BAA yakhiwa zinc lactate 60 mg (okuyi 12 mg zinc okumsulwa). Kuhloswe ukuqeda ukuntula uvithamini C ne-zinc, kanye nokuvinjelwa imikhuhlane. zinc okunjalo Pharmacy kungadla 150 ruble. Umuthi is contraindicated ku abesifazane abakhulelwe nabancelisayo, njengoba nje iye laqanjwa eziningi izakhi ezinobuthi (ezifana phambili, cadmium, i-arsenic ne-mercury).
"Zinc" - Izithako zokudla ngendlela amaphilisi effervescent. Zinc linikezwa ngesimo sulphate, e isamba 44 mg ngayinye 1 ithebhulethi (10 mg zinc okumsulwa). Yakhelwe ukuqeda zinc ukuntula emzimbeni. Contraindicated in iziguli esingamahlalakhona kwezinso. Okunjalo amaphilisi zinc, intengo e ekhemisi elisezweni ububanzi ruble 300 kuya ku-500, kuthandwa kakhulu phakathi abathengi.
"Tsinkteral" - Izithako zokudla ngendlela amaphilisi, ngamunye okuyinto zinc gluconate - 15 mg, uvithamini C - 34 mg, kwasolwandle akhiphe - 105 mg, futhi adjuvants. Kunconywa izinguquko ezihlobene nokukhula esikhumbeni (ukulahlekelwa kuyaqina, imibimbi). Ngenxa iphesenti eliphansi okumsulwa zinc ukulungiselela ayikwazi ukuhlangabezana ngokugcwele nalokho okwakufuneka ukuze abantu lesi sici. Izimo Uthola le ukungabekezelelani izidakamizwa ahlanganisa kwasolwandle kanye nezinye izingxenye Bud kwengoma.
"Manje-L OptiZinc» -. Amathebulethi zinc nethusi zinc Lokhu ekwakhiweni uvezwa eziyinkimbinkimbi ne methionine acid acid.
Zombili lezi zinto kuba nomthelela omuhle kakhulu emzimbeni. Umuthi Kunconywa ukuthola ukuthuthukisa amasosha omzimba therapy inhlanganisela - yezifo yaleli pheshana, inhliziyo, imithambo yegazi, isibindi, iso futhi isikhumba izifo emathunjini. Lokhu amaphilisi zinc ngentengo ekhemisi impela high - ruble mayelana 500.
Zinc futhi Pharmacy angathengwa ngesimo lesi sidakamizwa "Biotsink" ngu-DR. SKALNY (amaphilisi angu-60, ngamunye equkethe 0.3 g zinc). Umenzi uthi lokhu kuyingxenye zinc engcono amuncwa wumzimba emangqamuzaneni. Ukwakheka: zinc lactate, glucose - njengoba umthombo amandla i antioxidant, amaqanda powder - fount amaprotheni, talc - yamathebhu, magnesium stearate - omunye izakhi eziyisisekelo kumaseli.
Properties: isivikelo ubuthi, ekuvimbeleni emdlavuzeni, ikhuthaza ukuthuthukiswa we-hormone yegilo kanye progesterone ne-testosterone, ngesivinini isilonda ukuphulukisa, yelula abasha, kuthuthukisa ekusebenzeni kobuchopho.
Lokhu akulona lonke uhlu imikhiqizo zinc, emakethe Russian. Kodwa abathengi abaningi uncamela izinguqulo angaphandle yalezi Izithako zokudla. Lokhu kuchazwe intengo kancane lezi zimali kanye nefomu ngcono nokwenziwa zinc emzimbeni.
Ungase ukhethe (powder) e ikhemisi - lokhu oxide (oxide) zinc. Nokho, kuleli fomu, it is kuyaqabukela esetshenziswa, futhi ngisho nangalesosikhathi kuphela lokusebenza langaphandle. Ngokuvamile, i-powder zinc ixubene nezinye nabavoti kanye ukukhiqiza yokugcoba ahlukahlukene, okhilimu, liniments nezinye izinhlobo Isikali equkethe zinc. Futhi ngenxa yokuthi bonke oxide (oxide) zinc ugxile pheshana emathunjini sibi kakhulu kunalokho okuboniswa zinc sulfate.
Nazi imikhiqizo ezimbalwa isibonelo: zinc wamafutha, i-zinc unamathisele, zinc-Naftalan wamafutha, unama-zinc, i-pasta zinc salitsilovo-, zinc-ihtiolovaya wamafutha "galmanin" (powder athlete sika Foot), amakhandlela 'Neo-Anuzol "(hemorrhoids) .
izidakamizwa ezinjalo kuyabekwa kaningi inabukeni amawala futhi inabukeni dermatitis ezinganeni, ukushisa prickly, amanxeba kanye ukusha, bedsores, eczema, i-herpes, streptococcal kanye nezilonda trophic.
Izidakamizwa nge-zinc izinhlelo zokusebenza ongaphandle: anti-inflammatory, uDries umswakama, isinqandakuvunda, astringent, ovikelayo ekusiza.
imiphumela emibi zinc
Ukuthenga zinc (amaphilisi) kule ekhemisi, cela mayelana side effects kanye contraindications of the izidakamizwa oyikhethile.
Ngokuvamile, abakhiqizi ucacise amalebula imikhiqizo yabo ungabelani zinc okumsulwa, kanye nenani ngesimo usawoti: sulfate, i-nitrous, bisglycinate, gluconate, acetate, picolinate, zinc citrate. Kukhona ne-zinc lactate - acidosis acid ifomu zinc. Ingxenye zinc okumsulwa Ngakho kakhulu esingaphansi ngesimo usawoti. Nokho, usawoti zinc kulula ukuthola futhi akubizi. Kukholakala ukuthi ukhethe i-nitrous futhi sulfate bavame ukubanga emibi, ngaphandle ezakheke ngayo. Nge ukungenisa kwabo abantu izimpawu iziyaluyalu ipheshana wokugaya ukudla ngokuvamile kwenzeka: isicanucanu, ukuhlanza, ukukhishwa isisu. Ngezinye izikhathi lezi zimpawu ayagwenywa uma wamukelwe zinc sulfate emva kokudla esindayo, hhayi esiswini esingenalutho.
Uma ungeyena beqiniseka ukusabela kwabo izidakamizwa ne-zinc, khona-ke akufanele bathathe ngaphambi kokuthi uhambe ekhaya. Kwezinye izimo, ungavele ehlukahlukene ukudla yakho Ukudla aqukethe zinc.
Isikhathi esihle - kuyini?